Barnaamijyada ugu Fiican ee Ciyaaraha Muusigga ee Android ee Aad Isku daydo (2020) - Barnaamijyada
Barnaamijyada ugu Fiican ee Ciyaaraha Muusigga ee Android ee Aad Isku daydo (2020)
Maalmahan, dad badan oo muusig ah ayaa laga yaabaa inay u wareegaan qaar ka mid ah barnaamijyada barnaamijyada qulqulka muusikada bilaashka ah sida Spotify , Pandora, Apple Music , iyo Google ayaa muusigga ciyaaraya. Laakiin wali waxaa jira dad folks ah oo ku sii laalaadaya ururinta warbaahintooda muusikada maxaa yeelay qulqulka kuma filna iyaga.
Haddii adiga, sidoo kale, aad leedahay urururin warbaahin ah oo aan adiga kugu habboonayn, ka dibna hubi xulashadayada gaarka ah ee barnaamijyada ugu fiican ee muusigga android-ka ee ku jira android. Marka, halkan waxaan ku raacaynaa liiska ugu fiican ee barnaamijka muusikada ee 'Music Music Player'.
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android Music Player:
Marka ay timaaddo haysashada barnaamijyada ugu wanaagsan ee muusigga ee android-ka ee aad ku isticmaali karto aaladaha Android, uma baahnid inaad ku tiirsanaato barnaamijyo muusiko oo fudud oo fudud. Haddii aad rabto inaad ka gudubto fudeedka, markaa halkan waxaad kuheleysaa fursado badan. Waxaan kaa dabooleynaa dhammaan walxaha adiga, laga soo bilaabo barnaamijyada qulqulka muusikada ee daruuriga ku salaysan ee fudud illaa barnaamijyada muusikada muusikada ee la duubay oo la soo koobay. Marka, aan kor u qaadno khibradaada muusikada adoo adeegsanaya barnaamijyadan.
Poweramp waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee taga-ciyaaryahanka muusigga ah ee loogu talagalay isticmaaleyaal badan oo Android ah. Waxay leedahay mawduucyo u gaar ah iyo isdhexgal jilicsan, oo aad kala soo bixi karto dukaanka Google Play. Barnaamijka muusigga muusigga sidoo kale waxaa ku jira astaamo badan oo muusig loo adeegsado, oo ay ku jiraan iskutallaab, dib-u-habayn aan kala go 'lahayn, sidoo kale wuxuu taageeraa liiska-soo-bandhigyada waaweyn oo ay weheliso taageerada Android Auto. Waxa kale oo aad ka heli doontaa dejisanno habeysan, tag tafatir, iyo aalado.
AIMP waa ciyaaryahan kale oo si cadaalad ah u adeegsada barnaamijyada muusigga ee android ka taageera noocyada faylka muusikada badankood, oo ay ku jiraan FLAC, MP4, MP3, iyo faylal kale oo badan oo muusig ah. Dadka muusigga ah waxay sidoo kale helaan mawduucyada martida loo yahay, xulashooyinka habeynta, iyo waxyaabo kale oo badan oo xiiso leh sida. AIMP waxay leedahay isugeyn mug leh, HTTP oo si toos ah ushaqeysa, barbareyn heer sare ah, waxayna dajisaa barnaamijyada muusigga muusigga muhiimka ah. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka sidoo kale wuxuu leeyahay nooc desktop ah haddii aad rabto inaad ku toogato laba qalab oo leh hal barnaamij.
Kani waa mid ka mid ah barnaamijyada muusigga ee ma-BS oo leh astaamo badan oo lagama maarmaan ah, oo ay ku jiraan UI fudud, cabbir yar oo APK ah, iyo waayo-aragnimo khadka tooska ah ah. Barnaamijka muusigga ayaa sidoo kale soo bandhigaya isla'egyo badan, safaf badan, tifaftire tag, aalado taageero leh, erayo gundhig leh, iyo galka galka.
Tani waxay noqon laheyd ikhtiyaarka ugufiican ee loogu talagalay dadka jecel muusikada kuwaas oo ubaahan barnaamijka muusikada muusikada oo muusikada ku ciyaaraya iyadoon waxyaabo dheeraad ah. Ugufiican waa gebi ahaanba bilaash si aad ugu raaxeysan karto muusikada iyada oo aan wax app ah laga iibsanin.
Afar. Muusikada Pulsar
Hadda, tani waa barnaamijka ugufiican ee muusigga muusikada ee aad hadda ka heli karto. Laga soo bilaabo naqshadeynta maaddada, dib u soo kabasho la'aanta, tafatirka tag, liistada liistada smart, ugu dambeysay. Isdhexgalka FM, xoqidda, iyo saacadda hurdada, waxaad yeelan doontaa dhammaan astaamahan cajiibka ah. Waa ikhtiyaar aad ufiican kuwa doonaya kuwa ugu yar ciyaartooyda barnaamijka muusikada.
Si kastaba ha noqotee, nooca loo yaqaan 'pro-version' sidoo kale waa mid aan qaali ahayn oo kaliya waxay ku dareysaa waxyaabo yar oo aad u qurux badan. Waxa ugu cajaa’ibka badan waa labadaba nooc bilaash ah iyo nooca caymiska oo aan xayeysiis lahayn.
Barnaamijka muusigga ee PlayerPro muusigga waa mid kale oo muhiim u ah barnaamijka muusigga android-ka oo leh astaamo layaableh iyo is-dhexgal fudud oo muuqaal ah. Isku xirnaanta fudud waxay ka dhigeysaa mid sahlan in la isticmaalo oo aad si sax ah u rakibi karto si aad u habeyn badan u sameyso.
Muusikada oo ay weheliso, waxay sidoo kale taageertaa fiidiyowyada lagu ciyaaro, aaladda 'android auto', dhif iyo naadir ah barbaraha bandhiga iyo taageerada Chromecast, qalabka wax lagu duubo, saamaynta maqalka ee kala duwan, iyo waxyaabo yar oo xiiso leh. PlayerPro music player wuxuu kaloo taageeraa muusikada Hi-Fi wuxuuna ku heli karaa demo kaliya $ 4.99.
BlackPlayer EX waa barnaamij muusiko oo xariif ah oo fudud. Shakhsigu wuu habeyn karaa oo ku shaqeyn karaa qaab tab ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay xoqitaan, aalado, isbarbar dhig, xayeysiis la'aan, ID3 tag tifaftire, mawduucyo, iyo taageero faylasha muusigga ee caadiga ah. Waxay u leedahay ikhtiyaar fantastik ah bahda muusigga ee yaraanta iyo fudeydka.
Waqtigan xaadirka ah, nooca bilaashka ah wax yar ayuu farageliyaa lafaha qaawan halka qaybteeda lacag bixinta ay bixiso astaamo aad u qurux badan. Nasiib wanaagse, noocyadeeda pro-ka ah ma ahan mid qaali ah sidaa darteed waxaad ugu raaxeysan kartaa waxyaabaha aad jeceshahay kharashyada macquulka ah.
MediaMonkey waa ciyaariyahan kale oo ugu wanaagsan ee barnaamijyada muusigga android-ka kaasoo leh tan badan oo astaamo ah, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah astaamaha ururada sida Podcasts, buugaagta maqalka, iyo awooda lagu kala sooco heesaha qaarkood ee ku raadinaya magacyada curiyaha.
Intaa waxaa sii dheer, barnaamijku wuxuu leeyahay waxyaabo aasaasi ah sida Barbaraha, oo wuxuu isku waafajin karaa maktabadaada muusikada kombuyuutarkaaga iyo taleefankaaga shabakadda wi-fi. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay xoogaa qalab adag laakiin waxay taageertaa qaababka cajiibka ah ee ka dhigaya mid ka mid ah nooceeda.
JetAudio waa ciyaar jecel barnaamijka muusikada ee loogu talagalay dadka isticmaala android sababtoo ah waxay leedahay qaabab kala duwan oo cajiib ah oo toos ah. Ciyaaryahankan barnaamijkan muusigga ah wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo dardar-geliyeyaal maqal ah oo loo heli karo inay yihiin waxyaabo kala duwan si loo xoojiyo waayo-aragnimadaada muusikada.
Dhinaca foorarka, waxay ku timid barbaraha iyo saamaynta muusikada ee fudud sida tifaftiraha tag, bass boost, widgets, iyo xitaa MIDI playbacks. Nooca bilaashka ah iyo midka la bixiyayba waa isku mid; farqiga kaliya ee ka dhexeeya waa xayeysiis la'aan wuxuuna leeyahay mowduucyo cajaa'ib leh.
9. Ciyaaryahanka Neutron
Neutron music player app waa barnaamij kale oo la aqoonsan yahay oo loogu talagalay barnaamijka muusikada ee muusikada oo caan ku ah dadka dhexdooda. Waxay leedahay astaamo kala duwan, oo ay ku jiraan a 32/64 engine haya'ad audio in si adag ku tiirsan android iyo macruufka. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in muusiggu si fiican u dhawaaqo.
Waxa kale oo ay leedahay astaamo kala duwan, oo ay ku jiraan noocyada faylalka ee gaarka ah, martigelinta astaamaha kale ee maqalka, iyo isku dheelitirnaan lagu dhisay. Si kastaba ha noqotee, waa waxoogaa qaali ah laakiin wali ku habboon dadka isticmaala taleefanka android.
Qalabka wax lagu duubo ayaa ah mid ku habboon ilaha furan ee barnaamijka muusikada ee android. Waxay ku xisaabtantaa iyada oo ah miisaan fudud, dhexdhexaad fudud oo ay si fudud u heli karaan adeegsadayaashu. Taas ka sokow, waxay leedahay qaab muuqaal ah oo UI ah. Xagga sare ee tan, waxaad ka heli kartaa mawduucyo fara badan si aad u beddeli karto muusikada sida aad rabto.
Isticmaalayaashu sidoo kale waxay heli doonaan astaamo sida tifaftire taaga, iskuxirka FM-ga, muuqaalka liiska wax lagu qoro, widget shaashadda guriga, iyo astaamo kale oo badan. Tani waxay noqon laheyd ikhtiyaarka ugufiican ee lagu dhageysto heesaha aad jeceshahay adoon wax ku dhicin. Dhanka kale, barnaamijkan wax wanaagsan ayaa ah mid ay heli karaan dadka muusikada leh oo aan wax ku iibsan karin abka iyaga oo leh kaarka Google play.
kow iyo toban. USB Audio Player Pro
Barnaamijkani waa boqorka barnaamijyadooda muusigga. USB Audio Player Pro wuxuu si hufan ugu shaqeeyaa sidii muusig maqal muusig oo wuxuu la yimaadaa wax yar oo maqnaansho la'aan ah, taageerada UPnP, 10-band EQ, iyo soo jiidasho, taageer UI.
Barnaamijkan muusiggu wuxuu taageeri karaa oo keliya illaa 32-bit, 394 kHz oo leh taageero loogu talagalay DSD, MQA, FLAC, SACD, iyo tan kumbuyuutar cod ah. Dheeraad ah, waxay si cad ugu shaqeysaa si aad u qurux badan USB DACs iyo HiRes DACs sidaada oo kale taleefannada casriga ah ee LG. In kasta oo nooca pro-ka uu qaali yahay, weli waa kan ugu fiican barnaamijka muusikada.
12. VLC ee loogu talagalay Android
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, liistadu waa VLC ee loogu talagalay Android. Waa mid la isku halleyn karo oo leh qaabab tan oo fiidiyow ah, nooca feyl muusigga codka ah, iyo MKV, FLAC, MP4, iyo OGG. Dheeraad ah, qashin-qubka warbaahinta ayaa si dhakhso leh uga heli kara internetka si ay halkan uga sii daayaan muusikada tooska ah. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa saamiyada disk-ka waxayna taageertaa DVD-yada DVD-yada oo ay weheliyaan waxyaabo badan oo la raaco iyo cinwaanno hoose ah.
Waxaad lahaan doontaa lafo-qaawan oo kugu faragelinaya nooca bilaashka ah, laakiin taasi way fiicnaan lahayd dhagaysiga muusikada bilaashka ah.
Dhageysiga muusikada aad jeceshahay wakhti kasta, meel kasta, waxay hagaajin kartaa niyaddaada hal ilbiriqsi gudahood. Hadda waxaad haysataa liiska ugu wanaagsan ee ciyaartooyda muusigga ah ee barnaamijka aad ku rakibto taleefankaaga casriga ah oo aad ku raaxeysato waxyaabahaaga muusikada oo aan dhib lahayn.
Barnaamijyada Muusikada ee ugu Fiican (Bilaash & Lacag)
Goobaha Muusigga ee aan xirnayn - Dhageyso Muusikada Meelkasta
halkaas oo i daawan kartaa movies online for free
si bilaash ah u daawada aflaanta ma diiwaan gashan
sida loo isticmaalo dm on instagram on pc
si toos ah wax uga daawo khadka tooska ah
samee goobaha filimada bilaashka ah waxay leeyihiin fayras